PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-11 - Vela bahleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-11 - IINDABA - NoSonwabo Yawa
Uyayibona laa mibhalwana mincinci isemazantsi kwiphepha elinemiqathango yokhuphiswano okanye isivumelwano esithile esiphakathi kwabo babini, ubokuyilumkela kuba yeyona kuye kujongwe kuyo ekugqibeleni xa ngaba akwenzeki into efunwa ngomnye wabo bakweso sivumelwano.
Le nto ndiyiqaphele amatyeli amaninzi gqitha nalapho uye ufumanise, umzekelo xa kuthethwa ngexabiso le nto ethile ezindidi ngeendidi ukusukela kwengomelelanga ukuya kuleyo yomeleleyo, uve kusithiwa amaxabiso aqala kwimali ethile, nawe ke uthabatheke kanti elo liphantsi lelento engekho mgangathweni, ze ezo zisemgangathweni zibe nexabiso eliphakamileyo.
Umhlobo wam apha othanda gqitha imali ufunda iphephandaba lasekuhlaleni ngenye imini ze abone isibhengezo esithi “XA UNOKUZA NOMKHONDO NOKUFUNYANWA KWALO MNTWANA USEMFANEKISWENI, EKHUSELEKILE, NOLAHLEKE KWINYANGA EPHELILEYO, LOO MNTU UYAKUZUZA IMALI ENGAMASHUMI AMAHLANU AMAWAKA!” – nako ke engalali ehamba efunisa kuba kakade umntwana lowo ebemazi kakhulu naye, de wawufumana umkhondo wakhe, nalapho kwaye kwavakala ukuba ugqityelwe kwindlu ethile ze waxelela amapolisa.
Ekufikeni kwakhe apho kuye kwafumaniseka ukuba umnikazi mzi lowo umbulele lo mntwana, andihleki okanye ndibe ndihlekisa ngentlungu yokubulawa komntwana, koko eyona nto ndiza kuyo yile yokuba umhlobo wam waye walindela imali yakhe, nto leyo angazange ayifumane suka waxelelwa ukuba makafundisise umbhalo lowo nothi “XA UNOKUZA NOMKHONDO NOKUFUNYANWA KWALO MNTWANA USEMFANEKISWENI, EKHUSELEKILE, NOLAHLEKE KWINYANGA EPHELILEYO, LOO MNTU UYAKUZUZA IMALI ENGAMASHUMI AMAHLANU AMAWAKA!” – ugxininiso lwalo mbhalo lukwigama elithi “EKHUSELEKILE” – ngoku uyifuna njani imali kuba akasekho.
Nqwa nedla ngokukhutshwa ngamapolisa nalapho kuye kuthiwe “ONOKUZA NOMKHONDO WOKUBANJWA, KUTSHUTSHISWE NGOKUYIMPUMELELO ABENZI BOBUBI BOKUBULALA OKANYE UKUQHEKEZA IBHANKI ETHILE” – apho ugxininiso lukwimagama elithi “KUTSHUTSHISWE NGOKUYIMPUMELELO” – ithi ke loo nto ukuba abo babanjiweyo baye bafunyaniswa bengenatyala nokuba kungenxa yokubhatyaza kwabezotshutshiso, wena loo mali soze uyibhaqe!